किन बुझाएनन् सद्भावनाका २ सभासदले राजीनामा ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → किन बुझाएनन् सद्भावनाका २ सभासदले राजीनामा ?
किन बुझाएनन् सद्भावनाका २ सभासदले राजीनामा ?
September 29, 2015१३७ पटक
काठमाडौं–संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा आएको भनेर ब्यापक प्रचारबाजी भए पनि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका दुई सभासदले अझै राजीनामा बुझाएका छैैनन्। सद्भावनाका ६ सभासद मध्ये प्रमुख सचेतक नरसिंह चौधरी र अर्का सभासद माधवीरानी साहले भने अझै राजीनामा संसद सचिवालयमा दर्ज गराएका छैनन् । ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले सद्भावनाका ६ मध्ये ४ जना सभासदको मात्रै राजीनामा आएको बताए । ‘सद्भावनाका ६ सभासद मध्ये ४ जनाले लिखित रुपमा राजीनामा पेश गर्नु भएको रेकर्डमा देखिन्छ,’ गौतमले नागरिकन्युजसँग भने, ‘राजीनामा दिएका ४ सभासदको पनि स्विकृत भने अझै गरिएको छैन, हामी उहाँहरुको राजीनामा अध्ययन गर्दैछौं।’ उनका अनुसार ब्यवस्थापिका संसदको ऐन कानुन, विधि र प्रक्रिया अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्रै सद्भावनाका ४ सभासदको राजीनामाको बारेमा निर्णय लिइने छ । सद्भावनाका नेताहरुले राजीनामा दिएर मधेस आन्दोलनमा उत्रिएको दाबी गर्दै आएका छन् । गत चैत १०–११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बिस्तारित बैठकको निर्णय अनुसार सो राजीनामन दिने घोषणा गरिएको बताए पनि सद्भावनाका दुई सभासदले भने पार्टी नीति अटेर गर्दै महिना दिन नाघिसक्दा पनि राजीनामा पेश नगरेका हुन्। संविधान निमार्ण जारी रहेकै बखतमा सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेस बिरोधी संविधान आउने लागेको भन्दै सामुहिक राजिनामा गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिन पछि ४ सभासदले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ समक्ष भदौ १ गते राजीनामा दिएका थिए ।
तर, दुई सभासदले भने त्यो बेला राजीनामा दिएका थिएनन् । राजीनामा दिएका ६ मध्ये ३ सभासदले भने ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयवाट मासिक रुपमा तलब भत्ता भने अझै पनि बुझिरहेका छन्। यसरी तलबभत्ता बुझने सभासदहरुमा संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, बिमलकुमार केडिया, शैलीकुमारी देवी हुन्। सभासद देवी अध्यक्ष महतोकी पत्नी हुन भने अर्का सभासद केडिया उद्योगपति पनि हुन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङ समक्ष राजीनामा बुझाएका सभासद मध्ये सञ्जय साह भने जनकपुर बम काण्डका आरोपमा हाल जेलमा बन्दी अवस्थामा छन् ।
सदभावनाका सभासद साह संविधानसभावाट निलम्बनमा परेका एक मात्र सभासद पनि हुन्। राजीनामा नबुझाउने मध्येका सुगरका बिरामीसमेत रहेका सभासद चौधरी उपचारका लागि हाल भारतमा छन् भने अर्की सभासद साहले भने ‘राजीनामा किन अझै नदिनु भएको ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नै चाहिनन् । ‘म अहिले बिजी छु’ भन्दै उनले कुराकानी नै गर्न चाहिनन् । राजीनामा दिएका ४ सभासद भने गत भदौ २ गते देखि संविधानसभा÷ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा जान छाडेका हुन्।